Mgbazinye nchedo | Law & More B.V. | Eindhoven na Amsterdam
blog » Mgbazinye
Mgbe ị gbazitere ụlọ na Netherlands, ịnwere ikike ịgbazite nchedo na akpaghị aka. Otu ihe a metụtara ndị ọrụ gị na ndị ọrụ ụlọ. N’uzi, nchebe mgbazinye nwere akụkụ abụọ: nchedo ego mgbazinye na nchedo mgbazinye na nkwụsị nke nkwekọrịta ụlọ ahụ, n’echiche na onye nwe ụlọ enweghị ike ịkwụsị nkwekọrịta ụlọ ahụ. Ọ bụ ezie na akụkụ abụọ nke mkpuchi mgbazinye metụtara ndị nwe ụlọ nke ụlọ obibi, nke a abụghị ikpe maka ndị bi na ụlọ na ngalaba n'efu. Kedu nchebe mgbazinye bụ nke esemokwu na mgbe yana ihe nchedo mgbazinye mgbazinye ma ọ bụ nchebe mgbazinye na ọnọdụ nke nkwụsị mgbazinye, ka a tụlere na blog a. Mana nke mbu, blog a na akowa maka onodu aha ya bu ebe ana -eche maka imezi ulo obibi.
Maka itinye akwụkwọ nke iwu kwadoro gbasara nchekwa ụlọ, ọ ga-ebu ụzọ bụrụ ajụjụ gbasara oghere obibi. Dabere na Nkeji edemede 7: 233 nke Dutch Civil Code, a ga-enwerịrị ohere ịnwe ohere ịpụta ihe a na-emezighị emezi dịka a gbazitere ya dịka ụlọ nwere onwe ya ma ọ bụ nke na-abụghị nke onwe ya, ndị njem ụgbọala ma ọ bụ nguzo echere maka obibi ebighi ebi. Enweghi ndi ozo di iche n'etiti ndi ulo nke ulo nke onwe ma obu nke na-adighi aka onwe ya maka ebumnuche nke mkpuchi ulo.
Ebumnuche nke oghere obibi na-agụnyekwa ngwa ndị na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe, na okwu ndị ọzọ ụlọ ọrụ na site na ọdịdị ha nwere njikọ chiri anya na ụlọ, adọkpụ ma ọ bụ ụda ma ọ bụ nke bụ akụkụ ya site na nkwekọrịta mgbazinye. N'ime ebe obibi dị mgbagwoju anya, nke a nwere ike ịbụ, dịka ọmụmaatụ, steepụ, veranda na paseeji yana nrụnye etiti ma ọ bụrụ na edepụtara ha site na nkwekọrịta dị ka oghere ndị na-enweghị ihu ọha.
Agbanyeghị, enweghị ebe obibi dị ka Nkebi 7: 233 nke Dutch Civil Code pụtara ma ọ bụrụ na ọ metụtara:
oge dị mkpirikpi nke ebe obibi; ma nke a ọ bụ ikpe kpebisiri ike na-adabere n'ụdị okike eji, dịka ụlọ ezumike ma ọ bụ ụlọ mgbanwe. N’echiche a, obere oge na - ekwu maka iji ya eme ihe, ọ bụghị oge ekwenyeere;
ebe ndabere dabere; nke a bụ ikpe ma ọ bụrụ na ụlọ ahụ gbazitere ọnụ yana oghere azụmahịa; ọ bụrụ otu ahụ, ụlọ bụ akụkụ nke ebe azụmaahịa a gbazitere agbazinye, nke mere na ọ bụghị ọnọdụ obibi ahụ mana usoro maka azụmaahịa metụtara ụlọ ahụ;
otu ụgbọ mmiri; nke a bụ ihe ịtụnanya nke na-adabaghị na nkọwa iwu nke edemede 7: 233 nke Usoro Dutch. Agaghị ele ụlọ dị otú a anya dịka ihe anaghị emebi emebi, n'ihi na enweghị mkpakọrịta na-adịgide adịgide na ala ma ọ bụ ụlọ akụ.
Mgbazinye ego mgbazinye
Ọ bụrụ na ezutela ọnọdụ obibi a kọwara n’elu, onye nwe ụlọ ahụ ga-ebu ụzọ nwee ọnụ ahịa mgbazinye. N'okwu ahụ, usoro mmalite ndị a ga-adị:
ruru n'etiti ogo, gụnyere ọnọdụ nke ebe a gbazitere akwụ ụgwọ na n'etiti ego mgbazinye nke a ga-akwụrịrị maka ya, ga-abụ ihe ezi uche dị na ya;
onye nwe ụlọ ahụ nwere nhọrọ mgbe niile iji nweta ego mgbazinye mbụ nke Kọmitii mgbazinye tụlere; nke a ga - ekwe omume naanị n’ime ọnwa isii ka mbido mgbazinye ụlọ ahụ gasịrị; mkpebi nke Mgbazinye Kọmitii na-adịgide adịgide, mana enwere ike itinye ya na Courtlọikpe Subdistrict maka nyocha;
onye nwe ụlọ enweghị ike ịga n'ihu na mmụba mgbazinye na-enweghị njedebe; Iwu oke a kapịrị ọnụ metụtara mgbazinye ego mgbazinye, dị ka oke mmụba ego mgbazinye ego nke Mịnịsta kpebiri;
ndokwa nke usoro iwu gbasara nchekwa mgbazinye bụ iwu dị mkpa, yabụ, onye nwe ụlọ enweghị ike ịhapụ ya na nkwekọrịta mgbazinye iji mebie onye nwe ụlọ ahụ.
Na mberede, ụkpụrụ ndị etinyere na-emetụta naanị onye nwe ụlọ nke ụlọ obibi. Nke a bụ oghere dị ndụ na-ada n'ime ngalaba mgbazinye ego, yabụ ka ama oke nke oghere obibi ahụ nke ngalaba nke ịgbazinye ego, ma ọ bụ n'efu. N'ihe banyere inye ụlọ ma ọ bụ nweere onwe ya, ego mgbazinye dị elu nke na onye nwe ụlọ anaghịzi eru eru maka enyemaka ego ịgbazite ma yabụ daa na nchedo iwu. Kè dị n'etiti ụlọ na-elekọta mmadụ na ndị na-elekọta mmadụ bụ ihe dị ka ọnụahịa mgbazinye ihe dị ka euro 752 kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ọnụego mgbazinye ego a kwenyere gafere ego a, onye nwe ụlọ ahụ enweghịzi ike ịdabere n'ụkpụrụ ndị a kọwara n'elu, n'ihi na ọ gbasara ego mgbazinye nke ụlọ nnwere onwe.
Mgbazinye ụlọ megide nkwụsị nke nkwekọrịta mgbazinye
Agbanyeghị, maka itinye akụkụ ọzọ nke nchedo ego mgbazinye, enweghị ọdịiche dị n'etiti ndị na-ebi n'ụlọ na -elekọta mmadụ na nke imesapụ aka. N'aka ozo, nke a putara na ndi nile bi ebe obibi na echedoro ha nke oma ma ha ghara ihapu nkwekorita mgbazinye, n'uzo na onye nwe ulo apughi ikpochapu nkwekọrịta mgbazinye. N’ebe a, echekwara onye nwe ụlọ ahụ n’ụzọ pụrụ iche n’ihi na:
nkwụsị nke onye nwe ụlọ anaghị akwụsị nkwekọrịta ụlọ ahụ dịka isiokwu nke 7: 272 nke Dutch Civil Code; na ụkpụrụ, ọ dịịrị onye nwe ụlọ ka ọ buru ụzọ nwaa ime ka njedebe nke nkwekọrịta mgbazinye ahụ kwenye site na nkwenye. Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ na onye nwe ụlọ ahụ ekwenyeghị na nchupu, njedebe nke onye nwe ụlọ anaghị akwụsị nkwekọrịta mgbazinye. Nke a pụtara na nkwekọrịta mgbazinye na-aga n'ihu dị ka ọ dị na mbụ ma onye nwe ụlọ ahụ ga-ede akwụkwọ maka iwu maka ịkwụsị nkwekọrịta mgbazinye na ụlọ ikpe mpaghara. N'okwu ahụ, nkwekọrịta mgbazinye agaghị akwụsị ruo mgbe ụlọ ikpe mere mkpebi a na-apụghị ịgbagha agbagha na nkwupụta nkwụsị nke onye nwe ụlọ.
na-elele edemede 7: 271 nke Dutch Civil Code, onye nwe ụlọ ahụ ga-ekwupụta ihe kpatara nkwụsị ahụ; ọ bụrụ na onye nwe ụlọ ga-akwụsị nkwekọrịta mgbazinye, ọ ga-enwerịrị usoro nke ihe ndị ahụ anyị kwuburu banyere Usoro Mgbapu. Na mgbakwunye na oge ọkwa, ntọala maka nkwụsị bụ usoro dị mkpa na nke a. Onye nwe ulo aghaghi igosiputa otu n’ime ihe ngbapu maka nchupu ya na nchupu ya, dika edere ya na edemede 7: 274 paragraf nke 1 nke Dutch Civil Code:
onye nwe ulo ebibeghi ndu dika ezigbo onye nwe ulo
ọ metụtara mgbazinye maka oge a kara aka
onye nwe ụlọ chọrọ ego mgbazinye ngwa ngwa maka ojiji nke aka ya
onye nwe ụlọ ahụ ekwenyeghị na ezi uche dị na ya ịbanye na nkwekọrịta mgbazinye ọhụrụ
onye nwe ulo choro imata ala eji eme ihe n’ego mgbazite dika atụmatụ zoning si di
ọdịmma nke onye nwe ụlọ na njedebe nke mgbazinye ego karịrị nke ndị nwe ụlọ na n'ihu nke mgbazinye ego (ọ bụrụ na onye nwe ụlọ na-agbazinye ya)
enwere ike ịkwụsị ụgwọ ahụ site na onye ọka ikpe na ihe kpatara ekwuru na ederede 7: 274 paragraf nke 1 nke Dutch Civil Code; Ebumnuche ndị a edepụtara na njedebe zuru oke: yabụ, ọ bụrụ na a na-eduzi usoro ikpe n'ihu ụlọ ikpe, ịkwụsị nkwekọrịta mgbazinye na ntọala ndị ọzọ agaghị ekwe omume. Ọ bụrụ na otu n’ime ihe ndị ahụ e kwuru n’elu bilitere, ụlọ ikpe ga-enyerịrị ihe onye nwe ụlọ kwuru ịkwụsị ya. N'okwu ahụ, ya mere enweghị ohere maka ịtụle ihe ọzọ. Agbanyeghị, ihe dị iche metụtara mpaghara a gbasara ala nkwụsị maka ojiji nkeonwe. Mgbe enyere ikike, ụlọ ikpe ga-ekpebikwa oge maka ịchụpụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anabataghị nkwupụta nke onye nwe ụlọ ahụ, mgbazinye ya dị mkpa nwere ike ghara ịkwụsị ya ọzọ ruo afọ atọ.
Iwu Mbugharị Ahịa Mgbazinye
Na mbu, nchedo mgbazinye na-arụ ọrụ n'okpuru ọtụtụ nkatọ: mkpuchi mgbazinye gaara agabiga oke ma nwee ọtụtụ ndị nwe ụlọ ga-achọ ịgbazite ụlọ ma ọ bụrụ na nchebe mgbazinye adịghị oke. Onye omebe iwu ahụ egosipụtala nkatọ a. Maka nke a, onye omebe iwu ahọrọla iwebata iwu a ka ọ dị na 1 Julaị 2016, Iwu Mbugharị Ahịa Mgbazinye. Site na iwu ọhụrụ a, nchebe nke onye nwe ụlọ ahụ ghọrọ nke siri ike karị. N'ihe banyere iwu a, ndị a bụ mgbanwe kachasị mkpa:
maka nkwekọrịta mgbazinye n'ihe gbasara ebe obibi nke onwe nke afọ abụọ ma ọ bụ obere na nkwekọrịta mgbazinye n'ihe gbasara ebe obibi na-abụghị nke onwe ya nke afọ ise ma ọ bụ obere, emeela ka onye nwe ụlọ nwee ike ịgbazite na-enweghị nchekwa mgbazinye. Nke a pụtara na nkwekọrịta mgbazinye na-ejedebe site na ọrụ nke iwu mgbe oge ekwere na ọ gaghị abụ onye nwe ụlọ ga-akwụsị ya dị ka ọ dị na mbụ.
site na iwebata nkwekorita nke otu nkwekọrịta, emewokwa ka ọ dịrị onye nwe ụlọ mfe ịkwụsị nkwekọrịta mgbazinye banyere ụlọ ezubere maka otu ndị otu ebumnuche, dị ka ụmụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na onye nwe ụlọ ahụ abụkwaghị nke otu ndị a kapịrị ọnụ wee nwee ike, dịka ọmụmaatụ, agaghịzi ewere ya dị ka nwa akwụkwọ, onye nwe ụlọ ahụ ga-enwe ike ịga n'ihu nchupu ahụ n'ihi ojiji nke onwe gị ngwa ngwa na ngwa ngwa.
I bu onye nwe ulo ma ichoro maka nchedo mgbazinye gi tozuru? I bu onye nwe ulo choro ikwusi nkwekọrịta mgbazinye? Ma ọ bụ ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara blog a? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ọkachamara na iwu mgbazinye ma nwee obi ụtọ inye gị ndụmọdụ. Ha nwekwara ike inyere gị aka na iwu ma ọ bụrụ na esemokwu mgbazinye gị eduga na usoro ikpe.
Previous Post Gba alụkwaghịm na 10 nzọụkwụ
Next Post Kedu ihe bụ ikike gị dị ka onye nwe ụlọ?